Babe zisasazela kanjaloke izingane zabo mhlawumbe ligcine liphumelelile lelocebo lisuka kubantabadala bebodwa noma meyithwaliwe, bekuthunywa abantu abathize ukuthi bayobika ukuthi indodakazi yabo idukele khona, bethunywe abakubo kamfana, bese besho izinkomo abanazo, bazisho bese kuphuma owalapha ekhaya ebangenise bese ephinda futhi lezinkomo kade bezisho kukhulunywa ngenkomo ezisencane hhayi esezigugile, meyingenangane beziba yishumi nambili. Ziphuke kanjalo kuyengokuthi inengane ezingaki. Bese bekhipha nogwayi wogogo noswidi wamantombazane.
Bese beyakhululeka banikwe okuya ngasethunjini mhlambe lude nokhalo lapho bephuma khona. Ngobabayaneliseka indlela abalobole ngayo nezinkomo abazishoyo babaphakele babaphe amahewu inyama nezithelo lapha egcekeni kutshaliwe baphiwe badle abantu. Abakhongi laba basho nosuku lokuthi beze kobona izinkomo, lezi kade bezibala sebeshilo nemibala yazo, bese bephindela emuva bajika nelisti yezinto zababa wentombazane neyomembeso.
Masekusile kahle kade behleli ngaphandle ngoba phela nje befike ezintatha nje ngeke baphazamise kusalelwe bayalinda kuse, bangeniswe baohiwe okuya ngasethunjini, bahlobe abahlobayo bese kulungela ukuthi kuyiwe esigcawini. Futhi inkosi ikhiphe namaphoyisa ngokwe ngaba zawo ukuze umcimbi uhambe ngokuthula Induna yendawo ibikeliwe ngalomcimbi khona izokhipha iphoyisa nensizwa nentombi, kanye nalabo abazobe begadile ukuthi umcimbi uhambe. Inkosi yendawo ikhipha nelinye iphoyisa okuyilo eliphatha umcimbi wokuboshwa kwefindo lomshado yilo eliyibuzayo intombazane ukuthi uyamthanda lisho amagama aphelele omkhwenyana nesibongosakhe izithulele nje intombi mhlambe aze abuze kabili noma kathathu izithulele nje besekuthi ngesikade iphendule ngokuthi ishaye iphoyisa lenkosi ngesicephu lesi esisuke isiphethe lokho kusho ukuvuma.
Bonke abantu basuke behlezi phansi, ithi ingavuma besekuduma ihlombe basukume beyibongela besho izithopho zayo, bejabulisa insizwa ngokuthi ivunyiwe yilentombi. Kuke kwenzeke phela intombi iphike ngokuhi yona ukhona lomizimisele ngaye yase iphoqwa ngenkulumo bese iphika esigcawini. Emva kwalokho kuyasinwa kudedelwana kuyajatshulwa kuphuzwe nokhamba lokhu kade luhleli bemincile, intombi phela ibibamincisile bengazi izothini. Khona lapho ekundleni kusuke kuhlatshwe inkomo lekuzomukelwa ngayo umakoti bese ethelwa ngenyongo amukelwe ngapha bekulidwe izwi nje eliphuma kuye ukuthi uyathanda lento eyenziwayo kuye, nangakubo sebemenzele lokho njengoba ubaba wakhe esemphelezela eyomnika umkhwenyana.
Intombazane ikhipha ukhamba lotshwala, ikhiphela ubabezala, kodwa lungabinalutho isikhetho sotshwala,sisebenza ukukhetha amaphephelezi aphuma etshwaleni khathi ephuza ubaba, kuyenzeka buvovwe utshwala kodwa khona okusalayo yikho lokhu asebenzisa isikhetho ukukukhipha etshwakeni ucansi, ingubo yokulala. Besekwabelwa bonke abomdeni, mekuwumdeni omkhulu bese kukhethwa omdala okuwuye ozombeswa emdenini, lokho kwenzeka kakhulu mekuwumdeni omkhulu, mhlambe kunesithembu izindlu ziningi, kukhethwe kanjalo banikwe intoyokugqoka nengubo.
1 thought on “Umshado Wesintu”
isicazelo esihle ngesiko lethu